Sida loogu daro Saxiixa iimaylka gudaha App-ka Outlook ee Android | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Sida loogu daro Saxiixa iimaylka gudaha Appka Outlook ee Android
Sida loogu daro Saxiixa iimaylka gudaha Appka Outlook ee Android
Muuqaalka App-ka ee Android waa go-to-doorashadayda gelitaanka iyo dirida dhammaan iimaylladayda. Waa hab toos ah oo waxtar leh in loo isticmaalo Outlook Mail qalab kasta oo Android ah. Ku darida saxeexa iimaylada ayaa siyaabo badan kaa caawinaya. Halkan waxaa ah dhowr sababood oo loogu daro saxeexa iimaylka ee barnaamijka aragga ee Android.
Waa maxay sababta loogu daro Saxiixa iimaylka gudaha Appka Outlook ee Android?
Saxiixa Iimaylku wuxuu kaa caawinayaa inaad ku darto macluumaadka aad muhiim u ah oo caadi u ah dhammaan iimayllada aad dirto. Waa kuwan waxyaabaha aad ku dari karto saxeex iimaylka ahaan App-ka Muuqaalka:
1. Saxeexa Magacaaga: Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad magacaaga ku qorto email aad u badan, ka dib in magacaaga lagu daro email aad ayey muhiim u tahay.
2. Macluumaadka xiriirka: Waxa kale oo aad ku dari kartaa macluumaadkaaga xidhiidhka ee Saxiixa E-mailka si loogu ogolaado dadka inay kula soo xiriiraan habab kala duwan.
3. WebsaydhkaagaHaddii aad tahay ganacsi oo aad rabto in qof kastaa uu eego boggaaga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyadaaga iyo alaabtaada, markaa waxaad dhigi kartaa bogga ganacsigaaga.
Aynu fahano hababka loogu daro saxeexa iimaylka ee app-ka aragtida ee Android. Ilaa hadda, HTML si buuxda looguma taageero Saxiixa Iimaylka ee App-ka Muuqaalka ee Android, markaa Haddii aad rabto inaad sawirro geliso ama aad rabto inaad wax qaabaynta samayso, iska illow. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho Macmiilka Desktop ama Website Outlook si aad taas u samayso.
Raac tillaabooyinka soo socda si aad ugu darto Saxiixa iimaylka ee barnaamijka Muuqaalka ee Android:
Talaabada #1: Fur Menu Sidebar Outlook
Marka hore, billow App-ka Muuqaalka ee Android ka dibna Guji astaanta menu si aad u furto menu-ka dhinaca ee App-ka Muuqaalka. Waxaad ka heli doontaa icon-ka menu ee geeska bidix ee sare; tixraac sawirka hoose.
Fur Menu App-ka Muuqaalka
Talaabada #2: Fur Settings Outlook App
Ka dib markaad furto menu-ka dhinac-geeska ah, ka raadi summada gear ee geeska hoose-bidix ee liiska oo guji si aad u furto Muuqaalka App Settings.
Fur Settings Outlook App
Tallaabada #3: Guji Xulashada Saxiixa
Ka raadi ikhtiyaarka Saxiixa bogga Settings, oo muujinaya Saxiixaagi hore ama midka caadiga ah. Guji doorashada Saxiixa si aad u furto Saxiixa Tifaftiraha.
Tallaabada #4: Geli Saxiixaaga
Hadda, waxaad geli kartaa Saxiixaaga sanduuqa qoraalka, iyo hadda, qoraal iyo xiriirin kaliya ayaa loo oggol yahay sanduuqa Saxiixa ee Appka Outlook. Haddaba, geli qoraalka aad rabto in aad ku darto Saxiix ahaan, ama waxa kale oo aad ku dari kartaa xidhiidh qaab HTML ah. Tusaale ahaan:
Visit to DroidMaze
Tallaabada #5: Keydi Saxiixa iimaylka
Marka aad dhammayso inaad ku darto Saxiixaga sanduuqa qoraalka, dhagsii sumadda ku taal geeska kore ee midig si aad u badbaadiso Saxeexaga.
Ku darida saxeexa iimayladaada waa caado lama huraan ah oo kaa dhigaysa inaad u ekaato xirfadle saamaynna ku yeelato qaataha.
Sawirka leh Freepik
Sababta iyo Sida Loo Sameeyo Mareegaha Joogtada ah ee WordPress
Fahamka Hindisaha 'Caafimaadka Summada' ee Amazon